MDC-T Yoburitsa Humbowo hweMabirwo Akaitwa Sarudzo?
HARARE — MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai inoti yave nehumbowo hwakati tsvikiti hwekuti chii chaizvo chakaitwa nekambani yeku Israel mukubirwa kwainoti kwakaitwa sarudzo dzemusi wa 31 Chikunguru ne Zanu PF ichishandisa kambani iyi.
Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano we Standing Committee ye bato ravo, mutauriri weMDC-T, VaDouglas Mwonzora, vati vave nehumbowo hwekuti kambani ye Nikuv yakashandiswa sei ne Zanu PF mukubira sarudzo dzapfuura.
VaMwonzora vati vave nehumbowo hwemisangano yakaitwa ne Nikuv nevakuru vemasoja pamwe nevanhu veku China. Vatiwo bato ravo rave nehumbowo hwekuti Nikuv yakatamba tamba sei negwaro revavhoti rakashandiswa musarudzo idzi.
Va Mwonzora vatiwo vvave nemaminitsi emusangano wakaitwa nevakuru vakuru vevari muchiuto ku Manyame Airbase waive wakanangana nekubirirwa kwaizoitwa sarudzo dzemusi wa 31 Chikunguru.
Vati vakatarisira kupedza kunyora gwaro rehumbowo hwekubirirwa kwesarudzo svondo rino. Vatiwo gwaro iri richasvitswa kusangano renyika dziri kuchamhembe kwe Africa, re SADC, sangano re African Union pamwe ne United Nations.
Vakange vari mutongigava pagakava remu zimbabwe uye vari mutungamiri we South Africa, Va Jacob Zuma, vakaudza MDC-T kuti iburitse humbowo hunoratidza kuti sarudzo dzakabiridzirwa.
SADC pamwe ne African Union dzakati sarudzo dzemusi wa 31 Chikunguru dzakaitwa zviri pachena uye munyori mukuru we United Nations, Va Ban ki-Moon, ndevamwe vevakakorokotedza mutungamiri wenyika, Va Robert Mugabe, nekukunda kwavakaita musarudzo idzi.
Va Mwonzora vati chakakosha ndechekuti vekunze pamwe neruzhinji rweZimbabwe rwuzive kuti sarudzo idzi dzakanyatsobirirwa sei.
VaMwonzora vatiwo gwaro ravachaburitsa neChishanu richange risina kunyatsokwana sezvo komisheni inowona nezvesarudzo, ye Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, iri kuramba kuvapa gwaro revavhoti rakashandiswa musarudzo idzi.
ZEC inoti iri kutevedzera zvakaturwa nedare repamusoro zvekuti haisungirwe kupa MDC-T gwaro revavhoti iri.